Ny Cave Allegory dia maka ny UI an'ny Instagram hamorona asa | Famoronana an-tserasera
Instagram izao dia izao ny tambajotra sosialy fironana Anisan'ireo rehetra ahitantsika ny Facebook, Google+, Pinterest, Twitter ary ny maro hafa. Inona no mitranga amin'ny Instagram izay napetraka ho toy ny tian'ny mpampiasa an-tapitrisany, indrindra ny tanora marobe izay mamono azy amin'ny alàlan'ny fampidinana sary an-tapitrisany izay mamorona ny fiainany.
'The Cave Allegory' na ny Allegory of the Cave, dia tetikasa famoronana iray izay misy ifandraisany betsaka amin'ny Instagram, satria ampiasao ny interface interface amin'ny kinova birao sy ao amin'ny iPhone hamolavola sary lehibe iray manontolo izay mampiasa andian-tsary napetraka tsara miaraka amin'izay. Tetikasa iray mahita ny toerana misy azy ao amin'ny Instagram hampifaly antsika amin'ny fomba hafa ahitantsika zavatra na fampiasana an'ity tambajotra sosialy ity.
Notarihin'i CTopkis sy i JLTopkis (ny anarany anarany ao amin'ny Instagram) ary ny tena tanjon'izany dia ny mamorona ny mampiavaka anao manokana manavaka anao amin'ny maha-mpanao sary anao, raha ny hevitr'i CTopkis.
Ity asa ity dia maharitra herintaona ary natao tao amin'ny Adobe Illustrator. Mizara roa ity iray ity izay napetraka amin'ny fomba toy izany amin'ny interface Instagram izay iray manontolo. Ny Allegory of the Cave dia havaozina indroa isan-kerinandro mba hanisy andalana iray manontolo ary amin'izay dia eo alohan'ny tantara an-tsary izay mampiasa ny UI Instagram handamina ny tadiny rehetra.
Na dia azo zahana amin'ny birao Windows aza izy io, amin'ny iPhone eo no isehoany amin'ny refy rehetra. Raha ny hevitr'i CTopkis, rehefa nandeha ny herinandro, dia lasa psychedelic kokoa ireo sary navoaka, toy ny nitranga tamin'ny fiainany ihany ary satria io no fomba hanehoana ny heviny amin'ny fotoana mitovy amin'ny toe-javatra sy fotoana niainany tamin'ny androny fiainana andavanandro.
Ny tetikasa manana izany ianao hatrizay Ity rohy ity. Afaka mijanona ianao @JLTopkis y @CTopkis.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » 'The Cave Allegory' nataon'i CTopkis sy i JLTopkis ho fomba iray hafa hahitana ny interface Instagram
11 Banky famoahana sary avo malalaka XNUMX